माघ ८ काठमाडौ, राष्ट्रिय सभागृहमा एक कार्यक्रम गरेर भोगीराज चाम्लिङ्गद्वारा लिखित “जन नायक रामप्रसाद राई” नामक पुस्तक आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विमोचन गर्नु भएको छ । विसं. २००८ साल माघ ८ गते (आजकै दिन) रामप्रसाद राईले डा. केआई सिंहसँग मिलेर सिंहदरबार कब्जा गरेका थिए, जसलाई ‘सिंहदरबार विद्रोह’का रुपमा चिनिन्छ । यही दिनको स्मरण गर्दै आज माघ ८ गते शनिवार राष्ट्रिय सभागृहबाट उक्त पुस्तक विमोचन गरिएको हो ।
पुस्तकको एक अंशः रामप्रसाद राईले तहस नहस भएको मुक्तिसेना पुनर्गठन गरे । सिंहदरबार कब्जा गर्नुभन्दा केही पहिलेदेखि विद्रोहको तयारी गरिएको थियो । रामप्रसाद राईले सार्वजनिक भाषण गरेर चेतावनी दिनु यसैको संकेत थियो ।
भूगोलपार्कमा भाषण गरेपछि रामप्रसाद राईलाई सरकारले गिरफ्तार गर्‍यो । सुरुमा हनुमानढोका र भोलिपल्ट भद्रगोल जेलमा थुनियो । मानबहादुर राई भन्छन्:
बुबाले भन्नुभयो, ‘को रैछ त ?
हामी त जाने कुरा भएन । हाम्रो गार्ड चाहिँ गएछ । उसले पो समाचार ल्यायो, ‘लेˆटिनेन्ट सापलाई हनुमानढोकाभित्र लगे ।
Tags: रामप्रसाद राई
ओम रोदनको नयाँ गीत “तिमी बाहेक” सार्बजनिक (भिडियो सहित)